Union Minister U Kyaw Tint Swe arrives back from Israel – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
Union Minister U Kyaw Tint Swe arrives back from Israel
Union Minister for the Office of the State Counsellor U Kyaw Tint Swe arrived back to Yangon in the afternoon of6July 2018 after paying working visit to the State of Israel.
Union Minister U Kyaw Tint Swe held talk with Mr. Ayoob Kara, Minister of Communications of the State of Israel on4July at the Knesset Building in Jerusalem, and discussed matters on strengthening of bilateral relations and exchange of high-level visits, promotion of cooperation in multi-faceted areas between the two countries. In the evening on that day, Mr. Ayoob Kara, Minister of Communications of the State of Israel hosted the dinner to the Union Minister U Kyaw Tint Swe at the King David Hotel in Jerusalem.
During the visit, Union Minister U Kyaw Tint Swe also held talks with Mr. Michael Oren, Deputy Minister of the Prime Minister’s Office and Maj. Gen (Retd) Mr. Amos Yadlin, Executive Director of the Institute of National Security Studies (INSS) respectively and discussed matters of mutual interest.
Dated,6July 2018
နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင့်ဆွေသည် အစ္စရေးနိုင်ငံသို့ အလုပ်သဘောခရီး သွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၆ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် ရန်ကုန်မြို့သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိသည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင့်ဆွေသည် ဇူလိုင်လ ၄ ရက်နေ့တွင် အစ္စရေးနိုင်ငံ၊ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး Mr. Ayoob Kara အား ဂျေရုဆလင်မြို့ရှိ အစ္စရေးလွှတ်တော် အဆောက်အဦ၌ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး မြန်မာ-အစ္စရေး နှစ်နိုင်ငံအကြား ဆက်ဆံရေးနှင့် နှစ်ဖက် အဆင့်မြင့်ကိုယ်စားလှယ်များ အပြန်အလှန်လည်ပတ်မှု တိုးမြှင့်ရေး၊ နှစ်နိုင်ငံအကြား ကဏ္ဍပေါင်းစုံတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ရေးအတွက် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးအား အစ္စရေးနိုင်ငံ၊ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး Mr. Ayoob Kara မှ အဆိုပါနေ့ညပိုင်းတွင် ဂျေရုဆလင်မြို့ရှိ King David Hotel တွင် ညစာဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံခဲ့သည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင့်ဆွေသည် ခရီးစဉ်အတွင်း အစ္စရေးနိုင်ငံ၊ ဝန်ကြီးချုပ်ရုံး၊ ဒုတိယဝန်ကြီး Mr. Michael Oren၊ အစ္စရေးနိုင်ငံ၊ အမျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ လေ့လာရေး သုတေသနအဖွဲ့အစည်း (INSS) ၏ အကြီးအကဲ ဗိုလ်ချုပ် (ငြိမ်း) Mr. Amos Yadlin တို့နှင့်လည်း အသီးသီး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့သည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၆ ရက်